Ukuhlolwa kwee-cadastral - ii-Geofumadas
NgoJulayi, 2009 cadastre
Yiyiphi iCadastral Appraisal
Njengoko ndikhankanywe ngaphambili, i-appraisal ingaqwalaselwa ukuthengiselana isixhobo kunokuba enyanisweni, nto leyo efuna ukufumana benchmark emarikeni eyaziwa ngokuba ixabiso ezirhafelwayo. Ipropathi ingaba neenvavanyo ezininzi, ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemihla. Kudla ngezantsi ixabiso imarike (malunga 80%), hayi nje kuba avela isifundo elikhulu kodwa ngenxa yokuba ngokuqhelekileyo siye saxubusha ekusetyenzwa phantsi kwazo zinefuthe ixabiso lokugqibela lemarike, njengoko iindleko eyongezelelweyo ngeenkonzo zobungcali, iindleko zentengiso okanye iindleko zolawulo lwenkampani yophuhliso.
Kwimeko ye-Uruguay, ukunikela umzekelo: Ixabiso le-cadastral alinakugqithisa i-80% yexabiso lentengiso
Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kukuba isicelo ekuqokelelwa kweerhafu ngepropati okanye kwerhafu yepropati. Into yovavanyo-mali ukusetyenziswa komthetho wegalelo kunye nokulingana kwezentlalontle, ukucinga ukuba irhafu isasazwa ngokwexabiso lepropati (hlawula enye enye inayo). Kwakhona kufaka isicelo sokuthengiselana kweentengiso, ezahlukileyo phakathi kwamazwe ngokwemithetho, kodwa irekhodi ye-cadastral isoloko iinjongo ze-mboleko yebhanki, inkxaso yezoqoqosho kwisicelo se-visa yase-US, ukuchithwa kwempahla kunye neenkqubo zokuhlawulela, ukufundwa kwakhona xabiso,
Imithetho yelizwe ngalinye iyatshintsha ekusebenziseni le rhafu, njenge-El Salvador, apho ingekho phantsi kwelo qumrhu, kwaye kwimeko yeColombia apho le ntlawulo iquka:
Irhafu kwiipaki okanye kwimithi
Inzululwazi yerhafu yeCadastral
Kukho iintlobo ezahlukeneyo isicelo, ezinye phantsi Inkululeko kamasipala, njengoko kwimeko Honduras nabanye phantsi kolawulo oluyintloko kunye eSpeyin, apho Ministry of Finance yenza isifundo kweendawo amaxabiso kodwa oomasipala benze iintetho for ebumbene rates zendawo. Ngokuqhelekileyo yipropathi iinkcazelo kwi ikhowudi yoluntu, nto leyo ithi ibe ipropati leyo ayisuseki ukusuka sebali ngaphandle kokuphazamisa isakhiwo zalo ezisisiseko, oku kuquka ukwakhiwa, nezinye iziphuculwa yaye izityalo ingqiqo kwixesha eliphakathi kwaye ixesha elide ukunyuka esisigxina ixabiso layo ngenxa yezizathu imveliso.
Rates zikholisa ukuhamba phakathi 1 kunye 15% amawaka ngamnye, oko kuthetha ukuba impahla exabisa kwi $ 200,000 ukuba isantya ngaphandle 4% iya kuhlawula $ 400 ngonyaka ngamnye. Ngaba ibonakala ngathi kakhulu, kodwa ngokuqhelekileyo ubunzima yesibini, xa sikhumbula ukuba kukho uhlobo olunye zerhafu ngqo ezifana:
Shishino kunye no shishino
Ukuhlaselwa kunye nokucwangciswa kwedolophu
Ukuqeqesha indlu yangasese, umlilo kunye nezinye iinkonzo
Ngokubanzi, uvavanyo lweedolophu, ukusebenzisa ezinye (iindlela nezinye) iindlela zokubuyisela indleko yokunciphisa ixabiso elincinane, linamacandelo amabini:
Ixabiso lelizwe. Oku kudla ngokuyinxalenye yesifundo esekelwe kwiintengiso zentengiso, okokuba ukuba kwenziwe ngeendlela ezimeleyo kunokuguqulelwa kwiindawo ezihambelanayo apho iifayile ezilinganiselweyo zomhlaba zifumaneka khona.
Ukongezelela, kukho izinto ezichaphazela ngabanye iipropati ezithile, ngokungahambi kakuhle okanye ezintle:
Ubume, xa kuthinta umngcipheko wehlabathi, umkhukula okanye ukwandisa indleko zokwakha
Ukuxhatshazwa komhlaba okanye umkhukula
Ubuhlobo bephambili - imvelaphi
Iinkonzo zikarhulumente ezikhoyo
Ngaloo nto ufumana xabiso lomhlaba
Kwimeko yeMedellín, zibhekwa njengezithethe ezichaphazela ukubaluleka komhlaba: i -pography, ukusetshenziswa komhlaba, iindlela kunye neenkonzo zoluntu. Yaye le mimandla ibizwa ngokuba yiindawo zokuhlala ze-geoeconomic, kunye neetafile zokuguqula, kwelinye isithuba esiza kubonisa inkqubo epheleleyo yeMedellín.
Ixabiso lentsimbi, oku kusetshenziselwa ukwakha izifundo zohlobo lokwakha, ezisekelwe ekulinganiseni kwezakhiwo eziqhelekileyo, ezathi zibalwe ngeendlela zeeyunithi zeendleko zeeyunithi. Emva koko inkqubo yokuthabatha idibanisa izinto ezakhayo ezichaphazela ixabiso; ngaloo ndlela: ukusetyenziswa okwakhiwa kwesakhiwo, uhlobo lwempahla kunye nomgangatho wabasebenzi okanye isixa semilinganiselo yezinto ezakhayo, kunokuchazwa ukuba udidi lwezobugcisa luhambelana njani.
Emva kokufumanisa uhlobo oluthile olufakelwe kuyo, lwandiswa ngamanqanaba angama-square, ukuba kukho umgangatho ongaphezulu komnye wokuqala, isicatshulwa esetyenziswayo kunye nesamba esenziwe ixabiso lesakhiwo.
Ukongezwa koko, ixabiso lokunciphisa ixabiso liye lasetyenziswa, apho itheyibhile isetyenzisiweyo esekelwe kwiminyaka yokwakha isakhiwo nokubuyiselwa kwamkelwe. Kwizakhiwo ezizodwa, ii-appraisals zenziwa ngezinye iintlobo zezindlela, ezifana nakwiimeko zenkampani yezokhenketho, indawo zoshishino kunye nezifundo zeteknoloji, ii-airports, njl. Ezinye iinkcukacha ezongezelelweyo zibalwa ngokwahlukileyo, nangona zibandakanywe ekuhlolisweni kwezakhiwo.
Ngaloo ndlela uhlolo-dolophu lwasezidolophini luquka isixa:
Ixabiso lezinye iinkcukacha ezongezelelweyo
Indawo yasemaphandleni, okanye i-rustic value ifana nedolophini, enezinto ezilandelayo:
Ixabiso lomhlaba, ukwenzela ukuba uphando lwexabiso lemhlaba kukho iindlela ezizodwa ezixhomekeke kulwalamano lwexabiso lemarike kunye nemveliso yalo kwindawo ethile kwezoqoqosho kunye neyezulu. Olu luhlu lubandakanya izinto eziphathekayo, ezemihlaba, yezolimo, ezendawo kunye neendlela zokufikelela eziphambili kwiinjongo zemveliso.
Ngoko, udidi lwehlabathi lwenziwa ngokusekelwe kwindlela yokusebenza kwezinto ezinokwenziwa kwezinto ezinokwenziwa kwezinto ezinokwenziwa komzimba, okuba yindawo ehambelanayo. Ixabiso liza kugqitywa lixabiso leemitha zendawo yendawo, kwindawo yesalathisi; oku, ngokungafani nendawo yedolophu, inezinto zokuguqula ezichaphazela ixabiso layo njenge:
Umgama ukuya kwiindawo zokuthengisa
Ukufikeleleka kwimizila yokunxibelelana
Umgama kumthombo wamanzi okanye kwinkqubo yokunkcenkceshela
Xa usetyenzisiwe, uya kufumana xabiso lomhlaba wasemaphandleni
Kwakhona ixabiso lomhlaba wasemaphandleni luquka xabiso kwezakhiwo, iifundo zokwakha izinto ezinokwakha zingabandakanya ukwakha okuqhelekileyo kwimimandla yasemaphandleni njengendawo yokugcina impahla, ifama, iindawo zokuhlala, njl. Kuya kuba neenkcukacha ezongezelelweyo eziza kubalwa ngokwahlukileyo, njengasezidolophini, ezifana namachibi okubhukuda, iindonga, iindonga, iindawo zokuhamba, izitebhisi, izitebhisi, njl.
Ixabiso le izityalo ezisisigxina, ngenxa yoko, ngokuqhelekileyo isifundo esekelwe kwiindleko zengeniso, abasebenzi kunye nokuchithwa kwemveliso kugqityiweyo kwisilinganiso semveliso eyahlukeneyo (ikhofi, i-cocoa, i-palm palm njll),
okanye xa kukho ingca nganye kumitha nganye. Kwaye oku kuya kuba nezinto ezinxulumene nokulindela komkhiqizo okulindeleke kulo kwesi sityalo, esibandakanya:
Emva koko, imveliso yesibalo sezityalo, ngenxa yeendleko zokulima kunye nokwandiswa yizinto eziza kuguqulwa ziya kuba ukubaluleka kwezityalo ezisisigxina.
Emva koko uvavanyo lwendawo yasemaphandleni luya kuba ne-sum of:
Ixabiso lezakhiwo okanye uphuculo
Ixabiso lezityalo ezisisigxina
Kusenokwenzeka ukuba abanye benu, kwisiqingatha salo lonke ngeposi bavakalelwa ngokungathi becula umdlalo capon phambi Melquiades weza ukunyanga ukuphuthelwa izigulo Macondo.
Kodwa kuyafaneleka, ubuncinane ukuba ngaba yinjongo yentlawulo yepropati. Kwimeko Colombia, ngenxa yoko, nifake ukusebenza izigaba ezithathu Update Cadastral e Medellin, utyalo-mali wayo iyonke yaba malunga 8,840 million, ingqokelela eyongeziweyo angamangalelwa kwi projekthi ingqikelelo nobunye Tax Property , kwiminyaka yokuqala ye-3 yobungqina, kuyafana malunga nezihlandlo ezilishumi elinesihlanu ixabiso elityalomali. Kwimeko Honduras, ingqikelelo irhafu welifa lokwenene sijongwa njengenye isakhono self ukuzinza kamasipala, kodwa ixesha lubonise ukuba ukuphunyezwa kwale nkqubo kulula discontinuity uzinzo.
Kwinqanaba elilawulayo leziko lolawulo lwezemali okanye indawo yezolawulo, lugqithisa kwaye lunikezela ukuqhubeka kwendlela, ukulinganisa kungenza umsebenzi osebenza kakuhle; luncedo kuphela kwimicimbi yerhafu. Iindleko zamanyathelo ngamnye okanye iindlela ze-hybride zingaphezulu kunokuqokelela okulindelekileyo.
Kwakhona kuthintela iinkqubo ezingekhoyo kumncintiswano wezabasebenzi kamasipala, xa ulawulo lwezopolitiko lubangela ukuba lube luyimfuneko qeqesha abantu rhoqo xa kukho utshintsho lukaRhulumente.
Kule nqaku kukho incwadana yokusetyenziswa kwendlela yokuhlola iedolophu
Post edlulileyo«Edlulileyo Idata kwi-cadastre
Post Next I-GUM ye-Quantum, okokuqala ngqondweniOkulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "I-appraisal cadastral"
Ndingathanda ukwazi ngakumbi malunga neengxaki ze-cadastre
Daniel Tiul uthi:
Hayi mna izandi irhafu embi kumhlaba kwiindawo ezisemaphandleni kuba ayivakali njalo kuba nje thina abahlala ezilalini akukho bafumana naziphi na uncedo oluvela kurhulumente, ukugqithisela kokungasindi kwethu, ithathele ingqalelo iimfuno zethu ngoko ukuba sibe hlawula irhafu kule mali yokubala. Singabantu baseCobán kunye nomasipala wesithili sethu asiphulaphuli xa sidinga.
I-synthesis synthesis, ngokukhawuleza kuya kuba nezinye iinjongo zokukhangela kweso sifundo, ndiqinisekile
Albanis Aguilar uthi:
Ulwazi olugqwesileyo kwiphepha lakho, ndawa njengeglavu enikwe ukuba ngeli xesha ndifuna ukwazi okungakumbi malunga noluntu lwasekuhlaleni, ukuhlaziywa kweedolophu kunye nendlela echaphazela ngayo ukulinganiswa komhlaba kulo ....
zibulela eziliwaka ngale ngcaciso. Ndiyathemba ukuba uyaqhubeka ushicilela ezinye ezininzi zezihloko.
Izifundo zee-cadastral appraisals ziyanomdla, zinika ingqwalasela yezifundo ngolwimi oluqondakalayo. Siyakuvuyisela kwi-portal.
NUBIA SARMIENTO uthi:
Enkosi ulwazi lwakho, umdla kakhulu kodwa Ndikhangela into ethile kwaye ingaba lukhona kusini na unxibelelwano apho unako ukufumana ixabiso square metre yomhlaba ngamnye barrancabermeja ngokukodwa ebumelwaneni weDanube.
Ndiyabonga kakhulu ngokusebenzisana kwenu